Myanmar National Human Rights Commission - Progressive Voice Myanmar
Home Our Work Myanmar National Human Rights Commission
We advocate for an effective MNHRC that demonstratesacommitment to the international standards set forth in the Paris Principles. This includes constructingameaningful and recurring dialogue with civil society, abolishing the influence of the President and the Myanmar Army, and advocating for the protection of human rights defenders. The international community must also seek to pressure the Myanmar Government into creating an NHRI that is truly in line with the Paris Principles and that proves its dedication to the promotion and protection of human rights.
On5September 2011, the Myanmar Government announced that it had established the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) which would be charged with promoting and safeguarding the fundamental rights of citizens in accordance with the Principles relating to the Status of National Institutions, otherwise known as the Paris Principles.
With the passing of its enabling law through the Myanmar Parliament in March 2014, the MNHRC established its mandate. In 2015, the Global Alliance of National Human Rights Institutions’ Sub-Committee on Accreditation awarded the MNHRCa‘B’ status, which means the commission is not fully compliant with the Paris Principles.
The establishment of the MNHRC can largely be seen as an attempt at placating the international community at that time; most notably, the former United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Tomás Ojea Quintana, who had been calling for the establishment ofaUN-led Commission of Inquiry into crimes against humanity and war crimes in the country.
Despite only being operational since 2011, the MNHRC has already demonstrated on numerous occasions that it will allow human rights investigations to be overruled or influenced by the Myanmar Army. The controversial prosecution of Brang Shawng, who was charged inacriminal court after issuingacomplaint to the MNHRC regarding the death of his daughter at the hands of the Myanmar Army, showed how the NHRI was incapable of preventing the intimidation of human rights defenders and the inability to hold the military accountable.
Inaction is another stain on the legitimacy of the MNHRC. Currently, political activists continue to remain imprisoned or awaiting trial on baseless charges and peaceful activists continue to be met with ruthless force and arbitrary arrest for merely criticizing the actions of the Myanmar Government. The Myanmar Army continues to commit systematic and widespread human rights abuses such as extrajudicial killing, sexual violence, torture, and forced labor in conflict and non-conflict areas. In other parts of Myanmar, ethnic minorities are being confined to camps and face systematic discrimination abuse from the highest levels of Government and society. Throughout all of this, the MNHRC has remained shockingly quiet – only conducting human rights investigations when the political risk is non-existent.
For the MNHRC to be effective, it must demonstrateacommitment to the international standards set forth in the Paris Principles. This includes constructingameaningful and recurring dialogue with civil society, abolishing the influence of the President and the Myanmar Army, and advocating for the protection of human rights defenders. The international community must also seek to pressure the Myanmar Government into creating an NHRI that is truly in line with the Paris Principles and that has proven its dedication to the promotion and protection of human rights.
You’re the Devil in Disguise: the Duplicitous, Obsolete MNHRC (14 December 2021)
Joint Submission to the UN Universal Periodic Review (37th Session of the Working Group): Myanmar National Human Rights Commission (9 July 2020)
မွနျမာနိုငျငံ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူ့အခှငျ့အရေးအခွအေနပေုံမှနျသုံးသပျဆှေးနှေးပှဲသို့ တငျသှငျးသော ပူးတှဲတငျပွခကျြ အလုပျအဖှဲ့၏ ၃၇ ကွိမျမွောကျ အစညျးအဝေး – မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ (9 July 2020)
Myanmar: A Little Less Conversation, A Little More Action Please (9 December 2019)
Recommendations on Reform of the Myanmar National Human Rights Commission Law (3 August 2019)
‘Return to Sender:’ MNHRC Enabling Law Must be Returned to Parliament for Structural Reform (9 October 2018)
2017 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia (5 December 2017)
2015 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia (18 September 2015)
2013 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia (30 September 2013)
2012 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia (8 November 2012)
Statements and Other Activities by Civil Society Organizations concerning Myanmar National Human Rights Commission
Myanmar civil society proposes new Union Human Rights Commission Law amid ongoing campaign of terror by the Myanmar military junta, urges its swift adoption (14 December 2021)
မွနျမာအရပျဘကျလူထုအဖှဲ့အစညျးမြားက မွနျမာစဈအုပျစုမှ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျမှုမြား ဆကျလကျလုပျဆောငျနသေညျ့ ကွားတှငျ ပွညျထောငျစု လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ ဥပဒအေသဈကို အဆိုပွုတငျသှငျးပွီး အမွနျဆုံး အတညျပွုပွဌာနျးရနျ တောငျးဆို (14 December 2021)
Open Letter from Myanmar CSOs and Asian NGO Network on NHRIs regarding APF’s statement on the situation in Myanmar (20 May 2021)
SEANF Must Suspend MNHRC Until NUG ReconstitutesaNew Human Rights Commission (5 May 2021)
International Partners Must End all Cooperation with the Myanmar National Human Rights Commission (11 March 2021)
နိုငျငံတကာလုပျဖျောကိုငျဖကျမြားအနဖွေငျ့ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျနှငျ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျမှုအားလုံး ရပျတနျ့ရမညျ (11 March 2021)
Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) Must Denounce the Military Coup and Uphold Fundamental Rights of Peoples (16 February 2021)
Myanmar National Human Rights Commission: Denounce the Coup, Stand with the People of Myanmar (11 February 2021)
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျအနဖွေငျ့ စဈအုပျစု၏ အာဏာသိမျးမှုကို ရှုတျခပြွီး မွနျမာပွညျသူလူထုနှငျ့အတူ တဈသားတညျး ရပျတညျသှားရနျ တောငျးဆိုသော ထုတျပွနျကွညောခကျြ (11 February 2021)
CSO Working Group on MNHRC Reform Call on the Myanmar government to Deliver on Commitments Made During its Human Rights Review (23 September 2020)
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးဆိုငျရာ CSO မြားအလုပျအဖှဲ့မှ မွနျမာအစိုးရအား လူ့အခှငျ့အရေးအခွအေနေ သုံးသပျပှဲဆှေးနှေးပှဲအတှငျး ၎င်းငျးကပေးထားခဲ့သော ကတိကဝတျမြားကို အကောငျအထညျဖျောဆောငျရနျ တောငျးဆိုခွငျး (23 September 2020)
သကျတမျးကုနျဆုံးနပွေီဖွဈသော MNHRC ၏ အဖှဲ့ဝငျမြား ပွနျလညျရှေးခယျြရေး လုပျငနျးစဉျကို ပှငျ့လငျးမွငျသာစှာ ဆောငျရှကျပေးရနျ အရပျဘကျအဖှဲ့အစညျးမြား တောငျးဆို (10 December 2019)
Civil Society Organizations Call for the Selection Process of New Commissioners for the MNHRC to be Transparent (10 December 2019)
Myanmar: Reinvigorate the Myanmar National Human Rights Commission to be an Independent and Effective Institution for the Better Promotion and Protection of Human Rights (9 December 2019)
လူ့အခှငျ့အရေးကို ပိုမိုကောငျးမှနျစှာ မွှငျ့တငျရေးနှငျ့ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျရေးအတှကျ လှတျလပျပွီး ထိရောကျသော အဖှဲ့အစညျးဖွဈ (9 December 2019)
မွနျမာအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျအား ပိုမိုအားကောငျးလာစရေနျ ခကျြခငျြးအကောငျထညျဖျောနိုငျ သောပွုပွငျပွောငျးလဲရေး အစီအစဉျလေးရပျ။ (12 November 2019)
Four Immediate Reforms to Strengthen the Myanmar National Human Rights Commission (12 November 2019)
လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေပြင်ရေး လွှတ်တော်ကော်မတီတွေနဲ့ ဆွေးနွေး (5 August 2019)
MNHRC Law Must Be Amended for Better Protection of Human Rights (3 August 2019)
လူ့အခွင့်အရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် ကော်မရှင်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရ (3 August 2019)
Interview: လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သူတို့အမြင် (31 July 2019)
Selection Process of New Commissioners for the MNHRC Must be Transparent and Inclusive ( 25 July 2019)
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သစ်များ ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် အားလုံးပါဝင်မှုရှိရန်လိုအပ် (25 July 2019)
MNHRC Must Take Stand on Extrajudicial Killings of Rakhine Villagers (14 May 2019)
ရခိုင်ရွာသားများ ဥပဒေမဲ့သတ်ဖြတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ MNHRC မှ မှန်ကန်သည့် ရပ်တည်ချက်ပြရန်လို (14 May 2019)
Important Documents related to the MNHRC
Strategic Plan 2020 – 2024 (Consultation Draft) (15 July 2019)
CSOs’ recommendation table for MNHRC Law Amendment (August 2019)
၂၀၂၁ ခုနှဈအတှငျး ကျောမရှငျသို့ ပေးပို့လာသောတိုငျတနျးခကျြမြားနှငျ့ အကဉျြးထောငျ၊ အကဉျြးစခနျးမြား၊ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးစခနျးမြားအား ကွညျ့ရှုစဈဆေးခဲ့မှုတို့နှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၁/၂၀၂၂) (8 February 2022)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၁၄/၂၀၂၀) (25 November 2020)
The Statement of Myanmar National Human Rights Commission (14/2020)
ပါတီစုံဒီမိုကရစေီ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲနှငျ့ စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၁၃/၂၀၂၀) (9 November 2020)
Statement of the Myanmar National Human Rights Commission on the observation of Multi-party Democracy General Election. Statement No. (13/ 2020)
ကိုဗဈ-၁၉ နှငျ့စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ ထုတျပွနျခကျြ ထုတျပွနျခကျြ အမှတျ (၁၂/ ၂၀၂၀) (15 September 2020)
The Statement of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) on COVID-19 Second Wave Statement No.12 / 2020
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျက ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈအတှငျး အကဉျြးထောငျ၊ အကဉျြးစခနျးနှငျ့ ထိနျးသိမျးစောငျ့ရှောကျရေးစခနျးမြားသို့ သှားရောကျ ကွညျ့ရှုစဈဆေးခဲ့ခွငျးနှငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြ အမှတျစဉျ ( ၁၁ /၂၀၂၀ ) (12 August 2020)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျသို့ တိုငျတနျးခကျြမြားအပျေါ စိစဈဆောငျရှကျမှုအခွအေနနှေငျ့ စပျလဉျြးသညျ့ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၁၀/ ၂၀၂၀) (14 July 2020)
ပါတီစုံဒီမိုကရစေီအထှထှေရှေေးကောကျပှဲ ကငျြးပမညျ့ကိစ်စနှငျ့စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၉/၂၀၂၀) (6 July 2020)
Statement of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) on the Multi-Party Democracy General ElectionStatement No. (9/2020)
ကခငျြပွညျနယျ၊ ဖားကနျ့တှငျ မွစောပုံပွိုကမြှုနှငျ့ စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ (3 July 2020)
The Statement of the Myanmar National Human Rights Commission on Landslide in Hpakant, Kachin StateStatement No. (8/2020)
အမြိုးသမီးမြား၏ဂုဏျသိက်ခာကို လေးစားအသိအမှတျပွုရေးနှငျ့ ဆိုကျဘာဆကျသှယျမှုစနဈအသုံးပွု၍ အနိုငျအထကျပွုခွငျး (cyber bullying) ရှောငျကွဉျနိုငျရေး မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ ( ၇/ ၂၀၂၀) (26 June 2020)
ဇူလိုငျလတှငျ စာသငျကြောငျးမြား ပွနျဖှငျ့မညျ့အပျေါ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ(၅ /၂၀၂၀) (29 May 2020)
အပဈအခတျရပျစဲကွောငျးကွညောခကျြနှငျ့စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ ထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၄ / ၂၀၂၀) (11 May 2020)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ‌ကျောမရှငျသတငျးထုတျပွနျခကျြ အမှတျ (၃/၂၀၂၀) (20 April 2020)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသား လူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ၏ တိုငျတနျးခကျြမြား ကိုငျတှယျဆောငျရှကျမှုနှငျ့စပျလဉျြး၍ သတငျးထုတျပွနျခကျြ အမှတျစဉျ (၂/၂၀၂၀) (30 March 2020)
The Statement of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC) on the status of its handling of complaints (2/2020)
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ ( ၁ /၂၀၂၀) (28 February 2020)
Statement of the Myanmar National Human Rights CommissionStatement No. ( 1 / 2020)
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၁၀) ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျသညျ့ (၇၁) နှဈမွောကျ အပွညျပွညျဆိုငျရာ လူ့အခှငျ့အရေးနတှေ့ငျ မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ (၇/ ၂၀၁၉) (10 December 2019)
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျ ( ၆ / ၂၀၁၉) (6 December 2019)
မွနျမာနိုငျငံအမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ခိုတောငျကြှနျးလူသတျမှုဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခကျြ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၅/၂၀၁၉) (9 September 2019)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၄/၂၀၁၉) (14 June 2019)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေး ကျောမရှငျ ရခိုငျပွညျနယျ၊ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ကြောကျတနျးကြေးရှာဖွဈစဉျနှငျ့ ပတျသကျ၍ သတငျးထုတျပွနျခကျြ အမှတျစဉျ (၃/၂၀၁၉) (13 June 2019)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၂/၂၀၁၉) (3 May 2019)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၁/၂၀၁၉) (6 January 2019)
မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၁၂/၂၀၁၈) (22 December 2018)
Statement by Myanmar National Human Rights Commission to mark the 70th Anniversary of Universal Declaration of Human Rights which falls on 10 December 2018 Statement No ( 11 / 2018) (10 December 2018)
၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ (၁၀) ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျသော ကမ်ဘာ့လူ့အခှငျ့အရေးကွညောစာတမျးနှဈ (၇၀) ပွညျ့ အထိမျးအမှတျ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၁၁/၂၀၁၈) (10 December 2018)
Statement of the Myanmar National Human Rights Commission with regard to the by-election of 2018 (Statement No. 10 /2018) (4 November 2018)
၂၀၁၈ ခုနှဈ ကွားဖွတျရှေးကောကျပှဲနှငျ့ စပျလဉျြး၍ မွနျမာနိုငျငံ အမြိုးသားလူ့အခှငျ့အရေးကျောမရှငျ၏ သတငျးထုတျပွနျခကျြအမှတျစဉျ (၉/၂၀၁၈) (4 November 2018)
ရိုက်တာသတင်းထောက် ကိုဝလုံးနှင့် ကိုကျော်စိုးဦးတို့အား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၉/၂၀၁၈) (4 September 2018)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် SSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ လူငယ်များအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည့်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၁၈) (7 August 2018)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်စဉ် (၇/၂၀၁၈) (11 September 2018)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်လရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (၆/၂၀၁၈) (11 September 2018)
Statement on the sentencing of journalists Ko Wa Lone and Ko Kyaw Soe Oo of Reuters News Agency Statement No. (9/2018) (4 September 2018)
Myanmar National Human Rights Commission Statement No.(7/2018) (26 June 2018)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၅၊ ၂၀၁၈) (19 April 2018)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ် (၄၊ ၂၀၁၈) မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (20 March 2018)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၃ / ၂၀၁၈) သက်ငယ်မုဒိမ်းကျူးလွန်သူများအား အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ရေးနှင့် ထိရောက်သော ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်နိုင်ရေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 19 February 2018)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ဆောင်ရွက်ချက် (၅ /ကာကွယ် / ၂၀၁၈) ( 19 February)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၂ / ၂၀၁၈ ) တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်အတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 13 February 2018)
Statement No. (1/2018) Statement by the Myanmar National Human Rights Commission (9January 2018)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၁ / ၂၀၁၈ ) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (9January 2018)
Statement by the Myanmar National Human Rights Commission on the arrest of two journalists ( 21 December 2017)
သတင်းမီဒီယာသမား နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 21 December 2017)
Myanmar National Human Rights Commission on the Occasion of the International Human Rights Day ( 10 December 2017 )
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 10 December 2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်က ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ထံသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာပေးပို့ခြင်း (2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 10 November 2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်များတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက် မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (3October 2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သတင်းမီဒီယာသမား ၃ ဦးအား အမှုကျေအေးပေးလိုက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 1 September 2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 26 August 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၇ /၂၀၁၇) သတင်းမီဒီယာသမား ၃ ဦးအရေးယူခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 30 June 2017)
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ဘာသာပြန်စာပေ စာတမ်းဖတ်ပွဲ (၂၀၁၇)၌ ဒေါက်တာမြင့်ဇံ ဖတ်ကြားသော “ ကမ္ဘာလုံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းကို မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်မှ မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုမှုနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သုံးသပ်ချက်အချို့” စာတမ်းအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်၏ သဘောထားမှတ်ချက် ( 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၆ / ၂၀၁၇) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိအကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများ၊ တရားရုံးအချုပ်ခန်းနှင့် ဆေးရုံအချုပ်ခန်းတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (5April 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် ( ၅ / ၂၀၁၇) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အကျဉ်းထောင်၊ ရဲစခန်းအချုပ်ခန်းများနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (5April 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၄ / ၂၀၁၇) ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ – (၂၁) ရာစုပင်လုံအား ကြိုဆိုထောက်ခံကြောင်း သဘောထားထုတ်ပြန်ချက် ( ၂၄ February 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၃ / ၂၀၁၇) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့ရှိအကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်းများနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အားကြည့်ရှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 16 February 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၂/ ၂၀၁၇ ) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်ဦး၊ မြင်ခြံအကျဉ်းထောင်၊ ရဲအချုပ်ခန်းများ၊ ဆေးရုံအချုပ်ခန်းနှင့် တရားရုံးအချုပ်ခန်းတို့အား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက် (27 January 2017)
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အမှတ်စဉ် (၁/ ၂၀၁၇ ) မောင်မိုးဝင်း (ခ) ပြည့်ဖြိုးအောင်အပေါ် လမ်းအလုပ်သမားခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ကိုမင်းမှ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ကြောင်း တိုင်တန်းချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု (6 January 2017)
Statement No (15/2016) Statement by Myanmar National Human Rights Commission on the occasion of the International Human Rights Day which falls on the 10th of December 2016 ( 10 December 2016)
Statement No (15/2016) ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 10 December 2016)
Statement No (14/2016) မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကောင်မရှင် မြင်းခြံအကျဉ်းထောင်တွင် ကွင်းဆင်းစုံစမ်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် (19 October 2016)
Statement No (13/2016) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ အိုင်ကလောင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးစခန်း၊ မှော်ဘီ၊ ထောက်ကြန့်နှင့် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်များရှိ အချုပ်ခန်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်း ( 11 October 2016)
Statement No (12/2016) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရွှေဘိုအကျဉ်းထောင်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 30 August 2016)
Statement No (11/2016) Statement of welcome on the 21st Century Panglong Peace Conference Myanmar National Human Rights Commission ( 26 August 2016)
Statement No (11/2016) ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင်လုံကို ကြိုဆိုထောက်ခံခြင်း ( 26 August 2016)
Statement No (10/2016) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကသာအကျဉ်းထောင်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( 19 August 2016)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်အစီရင်ခံစာ (28 May 2018)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (မြန်မာဘာသာမှ ရှမ်းဘာသာ) (31 January 2017)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (မြန်မာဘာသာမှ မွန်ဘာသာ) (31 January 2017)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (မြန်မာဘာသာမှ ပိုး- အနောက် ကရင်ဘာသာ) (31 January 2017)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (မြန်မာဘာသာမှ စကော ကရင်ဘာသာ) (31 January 2017)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (မြန်မာဘာသာမှ ပိုး-အရှေ့ ကရင်ဘာသာ)( 30 January 2017)
ကမ္ဘာ့လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း (ကချင်ဘာသာ) (30 January 2017)
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥပဒေဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (24 October 2016)
ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ( 24 October 2016)
၀န်ထမ်းရေးရာကိစ္စများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ( 24 October 2016)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ( 12 August 2016)
Strategic Plan ( 16 November 2015)
၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာ ( 07 September 2015)